'ပြိုင်ဖက်ကိုအနိုင်ယူဖို့ယှဉ်ပြိုင်သတ်ပုတ်နေရတဲ့ market space ကိုသွေးချင်းချင်းနီနေတဲ့ Red Ocean လို့ သူကပြောပြီး ပြိုင်ဖက်မရှိတဲ့၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုတာနဲ့သက်ဆိုင် ခြင်းမရှိတဲ့ market space ကိုတော့ ကြည်လင်ပြီး ပြာလဲ့နေတဲ့ Blue Ocean ပါတဲ့။ '' Military မှာသုံးတဲ့ strategy ရဲ့အစောဆုံးစာအုပ် The art of war ကိုရေးခဲ့သူကတော့ တရုတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးSun Tzu ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာသုံးရတဲ့ strategy ဟာလည်းအမြဲတမ်းတသတ်မတ်ထဲသုံးလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူကအခြေအနေ ၉ မျိုးမှာဘယ်လိုstrategyသုံးရမယ်။
လွင်ပြင်မှာဆိုတစ်မျိုး၊ တောင်တန်းမှာဆိုတစ်မျိုး၊ စစ်ပြင်တာ၊ ရန်သူရဲ့အားချက်၊ အားသာချက်ရှာတာဒါတွေအားလုံးသူရေးခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ business တွေမှာသုံးနေတဲ့ (SWOT Analysis) နဲ့အတူတူဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေအချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီးသုံးနိုင်တဲ့ strategy မြောက်များစွာရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်းဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ ဖြစ်ဖြစ် သုံးလို့ရတဲ့ strategy ကိုတော့သူကမရေးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး strategy ကို generic strategy လို့ခေါ်ပါတယ်။ generic strategy အဓိက(၂ မျိုး) ရှိပါတယ်။
၁။ Cost Leadership Strategy (တစ်ယူနစ်ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကိုအနည်းဆုံးလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြိုင်ဖက်ကိုအနိုင် ယူတဲ့နည်း)
၂။ Differentiation Strategy (ပြိုင်ဖက်ထက် ပိုမိုထူးခြားကောင်းမွန် ဆန်းသစ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ကိုထုတ်လုပ်ပြီးအနိုင်ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းပါ။) အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ တစ်ချို့ကတစ်ခုထပ်တိုးထားပါတယ်။
၃။ Quick Response or Speed of Service (ပိုမိုလျင်မြန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ကိုပေးခြင်းဖြင့် အနိုင်ရအောင်လုပ်တဲ့နည်း) ဒါတွေအားလုံးကတော့ ပြိုင်ဖက်ကိုယှဉ်ပြိုင်ပြီးဘယ်လိုအနိုင်ရအောင်လုပ်မလည်းလို့ စဉ်းစားနည်းတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Strategy နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတဲ့ စာအုပ်တွေကိုကြည့်ရင် strategy formulation (strategy ရေးဆွဲဖော်ထုတ်တာ)၊ strategy implementation (strategy ကိုအကောင်အထည်ဖော်တာ) ဆိုပြီးခွဲရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်သင်တဲ့အခါဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် formulation ကိုဘဲအဓိကထားသင်ကြပါတယ်။ implementation ကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ function တွေ (eg. Leadership, motivation, communication) မှာအသေးစိပ် သင်မှာမို့လို့ပါ။ အဲဒီတော့ သင်ယူတဲ့သူက strategic management ဆိုတာ formulation ဘဲလို့ နားလည်မှု လွဲသွားကြပါတယ်။ formulation ကသတ်သတ် implementation ကသတ်သတ် လို့ခံယူသွားတတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာပြောရရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြည်တော်သာစီမံကိန်းဟာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမေရိကန်ကအလွန်တော်တဲ့ ပညာရှင်တွေ ဆွဲခဲ့တာလေ။
ဒီအငြင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး implementation ကတာအခရာလို့ ပြောခဲ့သူကတော့ Bossidyဆိုသူ ဖြစ်ပြီး The Execution ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်မြောက်ပြီးမအောင်မြင်တဲ့ strategy တစ်ခုကိုအရမ်းကောင်းတာဘဲလို့ ဘယ်သူကချီးကျူး မှာလဲတဲ့။ ဘယ်လောက်အသုံးမကျတဲ့ strategy, အရမ်းမကောင်းတဲ့ strategy ဘဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ရင် strategy ကောင်းတစ်ခုလို့ခေါ်မှာပေါ့ တဲ့။ implementation ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာပါ။ formulation ကအရေးကြီးတယ်လို့ ပြောသူတွေကတော့ အများကြီးပေါ့။ အခုထိရှင်းပြခဲ့တာတွေ ကိုကြည့်ရင်
၂။ generic strategy ဟာ exclusive ဖြစ်တာ( costလျော့ချရင် ပစ္စည်းသာလွန်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး) (ကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်ဈေးကြီးမယ်၊ ဈေးပေါရင်မကောင်းဘူး)
၃။ formulation ကသတ်သတ် implementing ကသတ်သတ်
Blue Ocean Strategy ဆိုတာက
၁။ ပြိုင်ဖက်ကိုအနိုင်ယူဖို့စဉ်းစားထားတာမဟုတ်ဘူး (ပြိုင်စရာကိုမလိုတဲ့၊ ပြိုင်ဖက်မရှိတဲ့ ဈေးကွက်ထဲကနေရာလေးတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့ strategy. ဖြစ်ပါတယ်) (Creation of uncontested market space)
၂။ Cost လျော့ချတာနဲ့ သူများထက်ပိုပြီးသာလွန်ကောင်းမွန်လုပ်တာဟာ exclusive မဟုတ်ဘူး။ သဘောကတစ်ချိန်ထဲမှာ cost ကိုလည်းလျော့ချမယ်၊သူများထက် လည်းပိုပြီးသာလွန်ကောင်းမွန်အောင် value innovation လုပ်နိုင် ရင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။(ပေါချောင်ကောင်းပေါ့) (နောက်မှနဲနဲအသေးစိပ်ရှင်းပါမယ်)
၃။ Strategy formulation ရော implementing ကိုပါ planning process ထဲတပါတည်းစဉ်းစားထားတဲ့အတွက် strategy ကကောင်းပြီး implementation ကညံ့လို့ မအောင်မြင်တာဆိုတဲ့ အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စ မပေါ်ပေါက်တော့ဘူးပေါ့။ ပြောထားတဲ့ stepအတိုင်အားလုံးရအောင်လုပ်နိုင်ရင် သေချာပေါက်အောင်မြင် မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
Credit: Dr Tin Wn မှ ရေးသားဖော်ပြမှုများအယ်ဒီတာချုပ်မှ ပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြအပ်ပါသည်။ အယ်ဒီတာ၏အမှာ - Blue Ocean Strategy နဲ့ Red Ocean Strategy ရဲ့အဓိကစဉ်းစားရမဲ့အချက်တွေကတော့ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် Red Ocean Strategy သွေးချင်းနီရဲနေတဲ့ အပြိုင်တွေများတဲ့ စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်မလား၊ Blue Ocean Strategy ကြည်လင်နေတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းတဲ့ စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်မလားဆိုတဲ့ မဟာဗျူဟာနှစ်မျိုးကိုဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီးအောင်မြင်သောစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာဖြစ်စေဖို့ မျှဝေရေးသားလျှက်။